Aye Chan Myat Moe's Dad Speak Out About Poor Juristic System
Aye Chan Myat Moe's Dad Speak Out About Poor Juristic System 4.5
Model Aye Chan Myat Moe's Father Speaks Out the Poor Juristic System in Myanmar on her daughter murder case. Model Aye Chan Myat Moe, 20 years old, was murdered by her ex-boyfriend on August 26, 2014.
ဦး​လေးစကား​ပြော​တော်​တယ်​ ကျွမ်းကျင်​တယ်​ ဆု​တောင်း​ပေးပါတယ်​
Author — 19 missyou
အမှူ့စစ်​တဲ့​ကောင်​​တေ​ကော တရားခံ​ကော လူစိတ်​မရှိတဲ့​ကောင်​​တေ
Author — Solomonn Solomonn
:-( :-( :-( မမ​ရဲ့ စိတ်​မ​ကောင်းဖူး အ​သေ ​စောလိုက်​တာ ​နောက်​ဘဝကြရင်​​တော့ :-( :-(
Author — wine Su 998852885
Her dad spoke well. Must be the educated one.
Author — friedmosquito
အယ်ကောင်ကသေသတ်ချပလိုက် လီကောင် ကိုယ်ချင်မစာတဲ့ကောင်ခွေကောင် ငါလီလာဆုတ်လာ အမူစစ်တဲ့ကောင်တွေလည်လီပဲ
Author — two htetwinko
chan moe lay very much love you very sad
Author — Gta Vice
I am so sorry for Model a
Aye Chan Myat Moe's family and relatives.May God give her peace in haven. I amalaw student of Myanmar two decade age, since that time I came to know, it is very true " There isn't No Law, No Justice in Myanmar. But Money and Power is only Law and Justice.Therefore, I decided to leave county and study aboard, May Supreme God save every Burmese/Myanmar citizen.
Author — M Dean
At our country really poor justice system . Looking at ko par gyi case . . . So disappointed .
Author — Kay Khaing Kyaw
So bad...Whatever he must pay back for that ....God will ...She will be in haven...Peace...
Author — zinmar myo
ဦးလေးရဲ့စိတ်ထားကမွန်မြတ်ပါတယ် ဦးလေး သိပ်ပြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့ တရားမျှတမှုရှိလာမှာပါ
Author — Anto Ny
LAST DAY OF MODEL AYE CHAN MYAT MOE
'A Nu Pyin Nyar Pyoe Khinn' Actress Contest 2
ဆု​ရွှ​န်း​လဲ့ မ​င်္ဂ​လာေ​ဆာ​င်ြ​ပီ၊ ဘယ်သူေ​တွ ဂု​ဏ်ြ​ပု​ခဲ့​လဲ
ခဈြကိုကွီး (အပိုငျး ၁)Chit Ko Gyi (Part 1)ခနျ့စညျသူ၊ ခငျလှိုငျ၊ စိုးရနျအောငျ၊ အိခြောပို၊ ရှကျတယျ
Myanmar U19 vs Thailand U19 - ( 3-0 ) @ AFC Asian U-19 Championship 2014 Second Half(1)
The 5th Annual Scholarship Award of Pyay Ti Oo Foundation
ဟာသသရုပ်ဆောင် ရှက်တယ်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး
ကံပွင့်လာဘ်ပွင့်စီးပွားတက် ပဌာန်းဒေသနာတော်၊ နေ့စဉ်ပူနာယူပူဇော်ပါက၊ လိုအင်ဆန္ဒများပြည့်စုံပါမည်။...
Ye' Lay & Aye Mya Aung's Wedding Reception @ Strand Hotel
မန္တလေးမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ် နှင့် ခင်သူအောင် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ
Myanmar Long Hair Show 1